hard disk ပေါ်တွင်နေရာလွတ်များကိုနက်ရှိုင်းစွာသန့်ရှင်းခြင်း Gadget သတင်း
၇။ Hard Drive နေရာလွတ်ကိုလုံလုံခြုံခြုံပယ်ဖျက်နိုင်တဲ့အခြားနည်းလမ်းများ
“ လုံခြုံသောဖျက်ခြင်း” ဟူသောစကားစုကိုဖော်ပြပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအချက်အလက်များကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည် အထူးပြုကိရိယာအချို့ဖြင့်ပြန်လည်ဆယ်တင်ပါ သီအိုရီအရ၎င်းသည် hard disk ၏နေရာလွတ်ဖြစ်သည်။
ခဏလောက်စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ Hard disk ပေါ်ရှိဖိုင်အချို့ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်မိမိကိုယ်ကိုအပ်နှံခဲ့သည် ငါတို့အဘို့အသတင်းအချက်အလက်အများကြီးဖျက်ပစ်, အဲဒါပြီးသားအသုံးမကျဖြစ်ခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကိရိယာများဖြင့်လွတ်လပ်သောနေရာလွတ်သည်ယခင်ကထက်ပိုမိုသန့်ရှင်းလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သိုလှောင်ရေးစက်၏မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်သောမည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆိုပြန်လည်ရယူရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive တွင်အချက်အလက်များ၏အရန်သင့်သိမ်းဆည်းခြင်း
ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးစဉ်းစားရမည့်အရာဖြစ်သည် backup တခုကိုပေါင်းစပ်ထားတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive ၏ပါဝင်မှုအားလုံးသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောတစ်ခု (ပြင်ပတစ်ခု) သို့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေကြောင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပျက်ကွက်ပါက
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးမည့်ပထမဆုံးကိရိယာမှာအလွန်ထိရောက်ပြီးထိရောက်မှုရှိပြီးအထူးအပ်နှံထားသည့်ဤကိရိယာဖြစ်သည်။ အကြောက်လွန်ရောဂါခံစားနေရသောသူများအတွက် ယခင်က hard drive ထဲမှဖယ်ရှားသင့်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်။
Hard disk ၏ကဏ္ each တစ်ခုစီတွင်ဒေတာအမြောက်အမြားကို ထပ်၍ ရေးကူးနိုင်သည့်ပမာဏများစွာရှိသည်။ ဤထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းမှာအလွန်လွယ်ကူသည်၊ လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုလုပ် သိုလှောင်မှုယူနစ်နှင့်နောက်မှ၊ လွတ်လပ်သောနေရာကိုရွေးပါ၊ နောက်ဆုံးတွင်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုပြီးမြောက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမည့်ခလုတ်ကိုရွေးချယ်ပါ။
2. Moo0 Anti- ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
၎င်းသည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောထက်ပိုမိုသက်သောင့်သက်သာရှိသည့် interface ရှိသည့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်လိုသော disk unit နှင့်၎င်းတို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအကွက်များမှနောက်ထပ် parameter အချို့ကိုသာရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့အနက်မှအရေးအကြီးဆုံးအရာမှာဖော်ပြသည့်တစ်ခုဖြစ်သည် နေရာလွတ်တွင်အချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာဖျက်ခြင်း hard drive ။
3. ဖြစ်တဲ့ BleachBit
ဒါပေမယ့် interface ကလုံးဝကွဲပြားတယ်။ နိယာမအတူတူပဲ။ ငါတို့သာလိုအပ်တယ် Hard Drive (သို့) သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖိုင်တွဲကိုရွေးချယ်ပါ စတင်လုံခြုံစိတ်ချရသောသန့်ရှင်းရေးနှင့်ဖျက်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ရန်အတွက်သေတ္တာအချို့ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည်နေရာလွတ်တွင်သာပြုလုပ်သည်။
4. CCleaner ကို
ဒီ tool ၏ ကျနော်တို့ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့သည် hard disk ထဲရှိလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရာလွတ်အတွင်းရှိဒေတာအားလုံးကိုလုံခြုံစွာဖျက်ပစ်နိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေအကြောင်း။
အဲဒါကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်သည် ကတင်ပြသောနှင့်အတူအလုပ်ထိရောက်မှု။ ဘယ်ဘက် sidebar (Tools) မှ function ကိုသာရွေးချယ်ပြီးနက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုသည့် hard drive ကိုသာရွေးရမည်။
ဤကိရိယာသည်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများကိုထိန်းသိမ်းသူများအတွက် ဦး စားပေးကိရိယာဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဘယ်ဘက် sidebar တွင်ဖြန့်ဝေထားသောလုပ်ဆောင်ချက်အချို့ရှိပြီးမည်သည့်နေရာမှရွေးရမည် နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုထို option ကို တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသော hard drive များ။
ဤကိရိယာ၏ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအပိုင်းသည်၎င်း၏မျက်နှာပြင်တွင်ရှိသည်။ ထိုနေရာမှအသုံးပြုသူသည် disk ယူနစ် (တစ်ခု (တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပို)) ကိုသာရွေးချယ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်သန့်ရှင်းရေးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရမည်။
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ရောက်ရှိနိုင်သည် သတ်မှတ်ထားသော overwrite အဆင့်များရွေးချယ်ပါ သန့်ရှင်းရေးသည်နက်ရှိုင်းပြီးဘေးကင်းစေရန်အတွက် hard disk တစ်ခု၏တစ်ခုချင်းစီပေါ်တွင်။
7. Disk ပြုပြင်သူ
စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ဒီကိရိယာက နောက်ခံထဲမှာစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်, ၎င်းသည်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောမည်သည့်ကိရိယာကိုမဆိုအသုံးပြုမှုနှေးကွေးခြင်းကိုမခံစားရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » ၇။ Hard Drive နေရာလွတ်ကိုလုံလုံခြုံခြုံပယ်ဖျက်နိုင်တဲ့အခြားနည်းလမ်းများ